Tilmaamaha Macluumaadka LinkedIn: Hagaha Muuqaalka Ugu Dambeeya ee MasteringIn LinkedIn
Talaado, Febraayo 9, 2021 Talaado, Janaayo 11, 2022 Douglas Karr
Waxaa jira tan rabshado ah hadda qaybta ganacsiga. Waxaan shaqsiyan u arkey ganacsiyo badan oo yar yar inay daadiyaan ilaha suuq geynta inta ay socoto aafada iyo xirxirida la xiriirta. Isla mar ahaantaana, in kasta oo aan indha indheyn ku sameynayay shirkadaha ganacsi ee u halgamaya sidii ay u heli lahaayeen karti iyo khibrad khibrad leh.
Shakhsi ahaan waxaan kula talinayay dad badan oo ka tirsan warshadayda inay u rogaan diiradda astaamahooda LinkedIn iyo khibradooda shirkadaha waaweyn. Dhibaato kasta oo dhaqaale, shirkadaha leh jeebadaha qoto dheer waxay u arkaan fursadaha maalgashi, shaqaalaynta, iyo u diyaargarowga wejigooda kobaca xiga. Ganacsiyada yaryar si fudud uma haystaan ​​ilo ay tan ku sameeyaan.
Waxaan horeyba u daabacnay dhowr hagitaan infographic ah Macluumaadka LinkedIn, oo ay ku jiraan Tilmaamaha Xogta ee Linkedin iyo tayaynta a Macluumaadka LinkedIn ee Iibinta Bulshada, laakiin tan Xaashida Khiyaamada Ultimate ee Shaqooyinka Wakhtiga Firaaqada waa kheyraad dhameystiran oo fantastik ah oo lagu hubinayo inaad si buuxda ugu kordhiso LinkedIn isku xirka iyo shaqo raadinta.
Miyaad ogtahay in si dhammaystiran loo habeeyay astaanta 'Linkedin' inay 40 jeer u badan tahay inay helaan fursado shaqo?
Tilmaamaha ugu dambeeya ee Macluumaadka LinkedIn waxaa ku jira 7 Talaabo
Qaab-dhismeedka Profile-ka oo dhameystiran - Naftaada u hel sawir qaade xirfad leh si aad ugu soo qaadatid shakhsiyadda qaar sawirkaas, oo buuxi dhammaan meelaha LinkedIn kugu dhex maro! Sawirada LinkedIn waxay dejiyeen aragti hore oo muhiim ah.
Cabirka Sawirka - Sawirada ugu fiican ee muuqaalku waxay u muuqdaan kuwo ku fiican qalab kasta, hubi inaad raacdo qeexitaannada ay bixiso 'LinkedIn' iyo kuwa ku hoos qoran infographic.
Gaarsiinta Talooyinka - Markuu qof kuu sheego sida cajiibka ah ee aad u samaysay, weydii iyaga talo ahaan adoo adeegsanaya LinkedIn! Waxay la xiriiri doonaan shaqo kasta oo aad buuxisay.
Noocyada Qarsoon ee LinkedIn - Ku soo biir Kooxaha, Xusuus-qor LinkedIn oo hubi inaad ku muujiso Bandhigyadaada Slideshare halkaa!
Ka hel LinkedIn - Habee cinwaankaaga URL, u adeegso cinwaannada la habeeyay ee cinwaannada shaqada, oo dib ugu laabo websaydhkaaga iyo guryahaaga bulshada.
Talooyinka Maalinlaha ah ee 'LinkedIn' - bixinta qiime, wadaagista talooyinka, isku xirka shabakadaada si aad uhogasho, iyo inaad noqotid wakiil wanaagsan shabakadaada ayaa kaa caawin doonta inaad noqoto master-ka LinkedIn.
Sug Xogtaada - Dad aad iyo aad u tiro badan ayaa noqonaya bartilmaameedyada qorshayaasha phishing-ka waxaana lagu bartilmaameedsanayaa xoog u jabsiga ciidanka. Daar xaqiijinta 2-qodob si dadku aysan u afduuban koontadaada.
Haddii aad si deg deg ah u raadineyso jago cusub oo aad rabto inaad kordhiso fursadahaaga, waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale rabto inaad maal gashato LinkedIn Premium. Waxay ku siineysaa aragti aad u tiro badan oo ku dhex jirta baaritaanka gudaha waxayna kuu sahleysaa inaad wacyigelin dheeraad ah ku sameyso astaamaha soo socda:
Farriimaha InMail - si fudud ula xiriir maamulayaasha shaqaalaynta.
Ayaa Daawaday Faafaahintaada - eeg cidda aragtay astaantaada 90-kii maalmood ee la soo dhaafay.
Koorsooyinka Waxbarashada ee LinkedIn - marin u hel in ka badan 15,000 Koorsooyinka Waxbarshada ee LinkedIn ee uu hoggaaminayo khabiirku si ay u xoojiyaan xirfadahaaga ama u bartaan wax cusub.
Diyaarinta wareysiga - dhis kalsoonidaada una istaag inaad shaqaalayso maamulayaasha su'aalaha ugu sareeya ee wareysiga, jawaabaha wareysiga ee khabiirku ansaxiyay, iyo inbadan.
Infographic by Leisure Jobs, oo ah hoyga martigelinta, isboortiga iyo shaqooyinka tafaariiqda ee Boqortooyada Midowday.
Tags: shaqooyinka firaaqadaLinkedInWaxyaabaha ku xiranprofilein xiriir ahhagaha profilein linkin ahIsku xidhka xogta profileinTalooyin ku saabsan profileintayadoola xiriiriyaha
Sida Si Fudud Loogu Hubiyo, Loola Socdo, Oo Loo Hagaajiyo Xiriirada Jaban ee WordPress
Taasi waa inay noqotaa tan ugu dheer… Waxaan ula jeeday tafaasiisha ugu dhameystiran abid! 😉
Waan ogahay, sax? Laakiin waa la i ilaaway. 🙂
Apr 1, 2016 at 1: 38 AM
Douglas, boosteejo cajiib ah!
Aragti sharraxaad wanaagsan ee adeegsadayaasha LinkedIn ee raadinaya horumar xirfadeed.
Apr 1, 2016 at 8: 43 PM
Apr 30, 2016 at 2: 45 AM
Waad ku mahadsan tahay, balooggaagu waxtar badan buu leeyahay.